Wararka Maanta: Axad, Sept 10, 2017-Ciidamada Suuriya oo dib ula wareegay saldhiga ciidanka cirka ee ku yaalla dulleedka Magaalladda Deir ez-Zour
Dagaal xooggan oo ka dhacay dulleedka magaalladda ayaa ugu dambeyn ciidamada u suuragelisay in ay gudaha u gaalaan Dei.
Qabsashada Deir ez-Zour ayaa soo afjartay go'doon ay kooxda isugu yeerta khilaafada Islaamka ee daacish ku hayeen saldhigaasi.
Horaanti toddobaadkan, ciidamada milateriga Suuriya ee uu taageero Ruushka ayaa qabsaday qeybo kamid ah magalladaasi, waxaana halkaasi ay ku go'doomiyeen kumanaan rayid ah iyo ciidamo halkaasi ku sugnaa tan iyo sanadkii 2015-ka.
Magaalladda Deir ez-Zour ayaa ah magaallo qani ku ah shidaalka, taa oo istaraateji ahaan u wanaagsan ciidamada dowladda.
Madaxweynaha dalka Suuriya, ayaa horay u sheegay in kooxda Daacish aysan laheyn awood ay kusii heysan karto Magaalladda.